RW Khayre : Sabtida wixii ka dambeeya dalka xaalad Dagaal ayuu galayaa - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > RW Khayre : Sabtida wixii ka dambeeya dalka xaalad Dagaal ayuu galayaa
RW Khayre : Sabtida wixii ka dambeeya dalka xaalad Dagaal ayuu galayaa
October 19, 2017 admin249
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa wuxuu sheegay Dowladda Federaalka marnaba in aysan raali ka aheyn in la laayo Hooyooyinka iyo Aabayaasha Soomaaliyeed, taasi bedelkeeda ayuu dhalinyarada ugu baaqay in ay u diyaar garoobaan Dagaal ka dhan ah Shabaab.
Wuxuu sheegay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya muhiim in aysan aheyn in Madaxda iyo siyaasiyiinta ay mar walba isku mashquulaan oo ay is qabsadaan, dhalinyaradana keliya ay soo gurmadaan marka uu dhib dhaco, si taasi looga gudbo ayuu sheegay in marka horeba isku duubnaasho la helo, si guulo loo gaaro.
Khayre ayaa sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriayadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) uu soo jeediyay Sabtida wixii ka dambeeya dalka inuu geli doono xaalad dagaal.
Wuxuu kaloo sheegay Khayre in Madaxweynaha uu isugu yeeray Baarlamaanka labada Aqal maalinta Sabtida ah, isaga oo u sheegi doona in dalka uu galay xaalad dagaal, oo isaga uu ugu horeeyo.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay hal wado oo keliya in ay furan tahay, taasi oo ah inaanan mardambe la aqbalin in la laayo Gabdhaheena, Wiilasheena iyo inaanan aqbalin in nala xasuuqo.
Xasan Khayre ayaa Dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Gurmad Qaran oo maanta Qado sharaf uu u sameeyay ayuu ugu baaqay in sida hada ay isugu duuban yihiin ay isugu xirnaadaan.
Emre Can: Liverpool waxa ay ku laabatay wadada guusha
Madaxweynaha Hirshabeelle oo magacaabay gudoomiyaha degmada Balcad
Kheyre Garasho maleh ee Garaacasho buu leeyahay.